Nnukwu European Roulette Win na Crypto Casino Oke - pisklak.net
Nnukwu European Roulette Win na Crypto Casino Oke
Anyị na Casino Extreme na-eji anapụta nnukwu na ngwa ngwa. Mgbe ụfọdụ, naanị ihe anyị na-amasị ndị egwuregwu anyị bụ ndị kụrụ obere ihe ọchị, mana ọtụtụ ihe na-egosipụta ezigbo nka. Otu n’ime ha mechara merie nnukwu mmeri roulette na Europe ma o kwesiri ka ọ bụrụ kpakpando nke blog a.
Nnukwu European Roulette Win na Nzọụkwụ Ole na ole
Ọ bụla ọkpụkpọ na-enwe mmasị igwu egwu na ịke na cha cha nwere ịgbalị ịtụ ogho nanị otu oge. European roulette bụ otu n’ime ụdị egwuregwu abụọ a ma ama, na-esote American Roulette. Nanị ihe dị iche n’etiti ha bụ mgbakwunye abụọ nke okpukpu abụọ na nsụgharị ndị America. Onye egwu anyị nwere obi ụtọ na-egwuri egwu European roulette na crypto cha cha Oke ma nweta $ 6,491.
Egwuregwu ahụ malitere website Id otu nke na-abụghị obere ihe nke $720 mgbe bọọlụ kwụsịrị na ọnụ ọgụgụ 20. Otu onye ga-asị na ọ bụ ọdịmma ndị mbido, mana onye ọkpụkpọ anyị gosipụtara na ọ bụ onye isi ụkwụ, na ngwa ngwa. Nnukwu ihe ọkụkụ malitere ịmalite n’ahịrị. Eleghi anya otun’ime nọmba un nwere ihu ọma bụ 8n’ihi na ọ nwetara $ 1,440 mgbe ọ kụrụ ya. Nnukwu mmeri ọzọ only mgbe bọl ahụ kwụsịrị na 32 na onye ọkpụkpọ ahụ tinye $ 1,080 na akaụntụ ya.
Nọmba 28 wetara ezigbo nnukwu kụrụ $ 2,070 na onye ọkpụkpọ anyị. Mgbe obi ụtọ nke mmeri a, o jisiri ike kụọ nọmba two ugboro abụọ miniature nweta $ 1,050 oge ọ bụla. Ọ gwụchara egwuregwu that a na-aga nke ọma na ọtụtụ obere strikes na njedebe mechara fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 6,500.
VIP Uru na Ntughari ngwa ngwa
Eleghi anya, ọ dị mma ikwu na onye ọkpụkpọ a nwere obi ụtọ bụ onye otu ọgbakọ VIP anyị. N’ebe ahụ, ọ na-ejide ọkwa ọlaedo na uru niile na-eso ya. Offọdụ n’ime ndị ahụ bụ mgbawa na-akwụghị ụgwọ kwa ọnwa nke $ 50 na njedebe nkwụsị kwa izu nke $ 6,000.
Mgbe onye anyị nwere obi ụtọ gwụchara egwuregwu a, ọ rịọrọ maka iwepu ya, ndị na-akwado anyị miniature banye ebe ahụ. Ha nyefere ego na akaụntụ ya ozugbo.
Isi nke European Roulette
Typedị matches a nwere wiil nwere oghere 37 nwere ọnụ, gụnyere oghere 0. Ebumnuche bụ ịkọpụta agba, nọmba, ma ọ bụ otu ọnụ ọgụgụ nke bọọlụ roulette ga-ada. Nwere ike igwu nzọ dị n’èzí ma ọ bụ nzọ n’ime.
A na-etinye nzọ nzọ n’èzí na nnukwu nọmba nke nọmba ma ọ bụ n’otu agba. N’èzí nzo gụnyere nzọ na Red, Black, Odd, Even, 1-18, 19-36, 1st 12, 2nd 12, 3rd 12, # 2 to 1 pillar. N’èzí nzo nwere nsogbu ka mma nke mmeri d e obere ịkwụ ụgwọ.
A na-etinye nzọ n’ime nọmba a kapịrị ọnụ ma ọ bụ obere ọnụ ọgụgụ. N’ime ịkụ nzọ gụnyere ịgbatị ịkụ nzọ kwụ ọtọ, ịkụ nzọ, ịgba nzọ n’okporo ámá, ịkụ nzọ nkuku, na ọnụọgụ nọmba isii. N’ime nzo nwere obere nsogbu nke mmeri na ugwo di elu.